Akụkọ - Ekele maka oghere nke Shenzhen MEOKKON
Ekele maka oghere nke Shenzhen MEOKKON
N'ụtụtụ nke ọnwa Disemba 13, ngalaba nke Shenzhen nke MEOKON Sensor Technology (Shanghai) Co., Ltd. mere emume mmeghe. Maazị Andy, onye isi njikwa Shanghai MEOKON, Maazị Qiu, onye isi njikwa nke Chongqing MEOKON, na Mr. Ren, onye isi njikwa Shengzhou MIND gara na mkpụghe na akara nke Shenzhen MEOKON.
E guzobere Shenzhen MEOKON na Mee 2020 ma bụrụkwa enyemaka nke atọ mgbe Chongqing MEOKON na Shengzhou MIND gachara. Ntọala nke enyemaka ahụ bụ ihe dị mkpa nke usoro atụmatụ ahịa MEOKON ma ga-ewere ọrụ dị mkpa nke isi ụlọ ọrụ na ahịa South China. Ọ ga - agbaso usoro amamịghe azụmaahịa yana usoro njikwa nke "Shanghai MEOKON" iji gbasaa ifịk ifịk azụmaahịa ma mekwaa ka ọrụ ndị ọzọ dị gburugburu.
Anyị kwenyere na site na ngọzi na ike nke ọtụtụ akụ sitere n'isi ụlọ ọrụ, Shenzhen MEOKON ga-enye ndị ahịa nọ na ndịda China ezigbo nsonaazụ na ọrụ dị elu, ma gbakwunye na ọdịnihu dị mma nke MEOKON. Companylọ ọrụ ahụ ga-aga n'ihu itinye usoro nke "atụmatụ, nkwado sayensị na teknụzụ, yana nhazi mba".
N'ebe a, anyị ji obi anyị niile na-atụ anya na Shenzhen MEOKON, n'okpuru nduzi nke onye isi njikwa Maazị Amber, ga-aga n'ihu, guzobe akara ngosi teknụzụ MEOKON na mmetụta ụlọ ọrụ na ndịda China, wee nye amamihe na ike nke ndị MEOKON na ụlọ ọrụ mpaghara na mmepe akụ na ụba .
Ka anyi gozie Shenzhen MEOKON: ezigbo ahia! Nnukwu atụmatụ! Ọrụ ọganihu! Ndị ọrụ niile nke Shenzhen MEOKON ga-ejupụta na ịnụ ọkụ n'obi na omume ọrụ obi eziokwu, na-eche ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ka ha gaa ma duzie ọrụ ahụ na saịtị!
Okwu: NO 1220 ~ 1222, ECO International, Owuwu 8, Xiangbinshan, Zhongxi, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen City